Iibsiga Fitbit ee Google waa la xaqiijiyay | Wararka IPhone
Iibsiga Google ee Fitbit waa la xaqiijiyay
Horraantii toddobaadkan, waxaa bilaabmay in la faafiyo warar sheegaya in Google ay wada xaajood kula jirto sidii ay ula wareegi lahayd shirkadda Fitibt, warkaas oo ugu dambeyn la xaqiijiyey saacado ka hor. Raadinta weyn ayaa Fitibt siin doonta $ 2.100 bilyan.
Xaqiijinta rasmiga ah waxay ka timid Google lafteeda, iyada oo loo marayo maqaal ay ku xaqiijisay in Alphabet ay heshiis la gaartay iibsashada Fitbit, taas oo u oggolaan doonta inay diiradda saarto dadaalkeeda suuq ficil ahaan uga baxay sanadihii la soo dhaafay.
Sida ay ku sheegtay Google boostada halka ay ku shaacineyso iibsashada Fitibt:
Sanadihii la soo dhaafay, Google waxay horumar la sameysay la-hawlgalayaasha meeshan Wear OS iyo Google Fit, laakiin waxaan aragnaa fursad aan ku sii maalgashano Wear OS, iyo sidoo kale inaan u keeno Waxyaabaha ay soo saarto Google ee wearable-yada suuqa. Fitbit wuxuu horyaal run ah u ahaa warshadaha, isagoo abuurey alaabo soo jiidasho leh, waayo-aragnimo, iyo bulsho isticmaale firfircoon. Adoo si dhow ula shaqeynaya kooxda khabiirada Fitbit, iyo isu keenista AI, software, iyo qalabka ugu fiican, waxaan kaa caawin karnaa dhiirigelinta hal-abuurka dharka iyo abuurista alaabooyin waxtar u leh xitaa dad badan oo adduunka ah.
Tani ma aha tallaabada ugu horreysa ee Google ay ka sameyso suuqa dharka la gashado. Dhowr bilood ka hor, heshiis la gaadhay Fosail inaad iibsato qayb ka mid ah tikniyoolajiyadda ay soo saartay sannadihii la soo dhaafay, taas oo macnaheedu yahay Pixel Watch wuxuu ku gaari lahaa suuqa gacanta jiilka cusub ee Pixel, wax nasiib darro aynaan arag. Ka dib markii lagu dhawaaqay heshiiskan, waxay u badan tahay in sanadka soo socda haddii smartwach-kii ugu horreeyay ee ay naqshadeysay iyo soosaartay Google uu arki doono iftiinka maalinta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Iibsiga Google ee Fitbit waa la xaqiijiyay
Apple wuxuu bilaabayaa rukhsad sanadle ah oo loogu talagalay Apple TV + oo leh 10 euro dhimis
Tani waxay noqon doontaa habka loo qaabeeyo Apple AirTags cusub